HomeAmamịghe echicheAmamịghe echiche
Amamịghe echiche	Hapụ ikwu
Nghọta nke ọgụgụ isi na-enwekarị mmetụta site n'amaghị ókèala nke na-ekpebi ihe ga-ekwe omume na ihe na-adịghị na ọgụgụ isi, nke a na-akwado site n'echiche efu nke echiche efu na-eji akwụkwọ sayensi sayensị. Ka e wee nwee ọgụgụ isi dị ka ọkà mmụta sayensị, ọ dị mkpa iji chọpụta ókèala ndị a, ma si otú a wepụ ihe ndị a na-eme (mgbe ụfọdụ ọbụna site na anwansi). Ebumnuche ndị a na-ekpebi site na njirimara nke ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi dị. Nke mbụ, ihe a na-ekwu bụ ihe ọgụgụ isi. Ihe omuma nke mejuputara n'inwe ma jiri usoro nke oru mmadu (ndi ozo) nke anare anya nke oma. Ọrụ a na-eme site n'ụdị nke ụbụrụ mmadụ, ụwa dị adị n'ezie. Kemgbe mmalite ya (kemgbe narị afọ nke iri na itoolu), ihe ngosi a emeela ụzọ abụọ:
- N'ihi na themes si ata ụwa a na-na mkpa na-eji ihe ọmụma nweela site wuru ntụrụndụ kpọmkwem sayensị, mathematically dere dị ka (mmemme asụsụ) nọchitere anya mmekọrịta n'etiti variables. Ọ gaghị ekwe omume iji ihe ọmụma na-enweghị isi na-enweta site na ihe ọmụma ụmụ mmadụ, nke okwu nkenke, nke mmetụta uche na nke anụ ahụ na-anọchite anya ya. A pụghịkwa ịtụgharị ya n'asụsụ nkịtị. Ebe ọ bụ na wuru iwu asụsụ ike nke na-anọchite anya na ihe ọmụma nke ata ụwa, nke e nwetara site wuru ntụrụndụ kpọmkwem sayensị, na ọ bụ naanị obere akụkụ nke ihe ọmụma ụmụ mmadụ, otú ahụ applicability nke wuru ọgụgụ isi na nke a bụ nnọọ nta.
- Ọdịdị nke ọdịdị nke ntụgharị uche n'ime ụlọ. Enweghị ngwá ọrụ asụsụ ọ bụla iji kọwapụta ihe ndị mmadụ na-adịghị ahụkebe, ihe ndị na-emeghị nke ọma nke ụbụrụ mmadụ ka o wee nwee ike idozi ya site na kọmputa. Ọ bụghịkwa usoro ntanetị nke ụwa nkịtị na-enweghị ike ịbụ ihe zuru ezu zuru oke nke ezigbo ihe, nke na-enweghị isi, usoro mmadụ-psyche na-eme n'ime ụwa n'ezie - ụbụrụ mmadụ.
← Stephen Hawking nwụrụ
Onye na-eme ihe nkiri & nke ọgụgụ isi →